Hebrio 11 - Ny Baiboly
Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Hebrio
Hebrio toko 11
Fankalazana ny finoana sy filazana ny soa avy aminy, ao amin'i Noe, Moizy sy ny razana ary ny olo-marina maro be.
1Ary ny finoana no santatry ny zavatra antenaina, sy porofon'ny zavatra tsy hita. 2Nanam-pinoana ny ntaolo ka izany no nahatsara laza azy. 3Ny finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no namoronana izao tontolo izao, fa tsy mba zavatra hita no nanaovana izao zava-miseho izao.
4Ny finoana no nanoloran'i Abela tamin'Andriamanitra sorona tsaratsara kokoa noho ny an'i Kaina, sy nilazana azy hoe marina, fa nankatoavin'Andriamanitra ny fanatitra nataony; ary noho izany ihany koa, na dia maty aza izy, dia mbola miteny ihany.
5Ny finoana no namindrana an'i Enoka tsy hiharan'ny fahafatesana, ka tsy hita intsony izy fa nafindran'Andriamanitra, ary talohan'ny namindrana azy dia voalaza fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. 6Raha tsy misy finoana, dia tsy misy ahazoana sitraka amin'Andriamanitra koa: satria izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy hino fa misy izy, sady mamaly soa izay mitady azy.
7Ny finoana no nandrafetan'i Noe ny sambo fiara hamonjena ny fianakaviany, fa natahotra izy nony efa nilazan'Andriamanitra ny zavatra mbola tsy hita; ary izany no nanamelohany an'izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana izay azo amin'ny finoana.
8Ny finoana no naneken'i Abrahama ny fiantsoan'Andriamanitra azy, handeha ho any amin'ny tany izay horaisiny ho lova, ka niainga izy nefa tsy fantany akory izay halehany. 9Ny finoana no nitoerany tany amin'ny tany nampanantenaina toy ny any an-tany fivahiniana, tranolay no nitoerany; toy izany koa Isaaka sy Jakoba izay mpandova izany tany nampanantenaina izany koa; 10fa nanantena ilay tanàna mafy orina manana an'Andriamanitra ho tompo-marika sy ho mpanao izy.
11Ny finoana koa no nahazoan'i Sarà hery hanana anaka, na dia efa antitra tsy tokony hiteraka intsony aza izy, satria nino izy fa mahatoky ilay nampanantena. 12Koa dia taranaka maro toy ny kintana eny an-danitra, sy tsy hita isa hoatra ny fasika eny amoron-dranomasina no avy amin'ny olona anankiray izay efa toy ny maty.
13Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, nefa tsy mbola nahazo ny nampanantenaina, fa nahatazana azy lavitra fotsiny, dia niarahaba azy tamin-karavoana sy fiekena hoe: vahiny sy mpivahiny izy no ety an-tany. 14Manambara mazava izay milaza izany fa mitady tanin-drazana honenany izy. 15Ary raha ny tany nialany no heveriny amin'izany dia ho azony atao ny miverina any indray; 16fa tany tsara lavitra no irìny, dia ny lanitra izany. Ka noho Andriamanitra efa namboatra tanàna ho azy, dia tsy menatra izy hantsoina hoe: Andriamanitr'izy ireo.
17Ny finoana no nanoloran'i Abrahama an'Isaaka ho sorona, raha nozahan-toetra izy. Dia izy izay nandray ny teny fampanantenana, 18sy nilazana hoe: Avy amin'Isaaka no hihavian'ny taranakao; eny, natolony io zanany lahitokana io; 19satria ninoany fa na dia maty aza izy dia hain'Andriamanitra atsangana, ka dia noraisiny indray ny zanany, ary tandindon-javatra izany.
20Ny finoana no nitsofan'Isaaka rano an'i Jakoba sy Esao ny amin'ny zavatra ho avy. 21Ny finoana no nitsofan'i Jakoba rano ny zanak'i Josefa roa lahy, rahefa ho faty izy, sy nivavahany niankina tamin'ny loha tehiny. 22Ny finoana no nilazan'i Josefa ny hialan'ny zanak'Israely, rahefa ho faty izy, sy nanafarany ny amin'ny taolam-balony.
23Ny finoana no nanafenan-drainy aman-drenin'i Moizy azy telo volana, nony efa teraka izy, satria hitany fa zaza tsara tarehy izy, ary tsy natahorany ny didin'ny mpanjaka. 24Ny finoana no namoizan'i Moizy ny anarana hoe zanaky ny zanakavavin'i Faraona, nony efa lehibe izy, 25fa naleony miaraka ory amin'ny vahoakan'Andriamanitra toy izay miarana amin'ny hafaliana mandalon'ny fahotana; 26nataony ho harena be lavitra noho ny zava-tsoan'i Ejipta ny fijalian'ny Kristy, satria nijery ny valisoa izy. 27Ny finoana no nialany tany Ejipta, tsy aman-tahotra ny fahatezeran'ny mpanjaka akory, fa nijoro toy ny mahita ilay tsy fahita izy. 28Ny finoana no nanaovany ny Paka sy ny famafazan-dra mba tsy ho tratr'ilay nandringana ny lahimatoa ny zanak'Israely.
29Ny finoana no nitàn'izy ireo ny ranomasina Mena, toy ny mandeha an-tanety; nony mba nanaraka kosa ny tera-tany Ejipsiana, dia nosaforan'ny rano. 30Ny finoana no nampirodana ny mandan'i Jerikao, rahefa nohodidinina hafitoana. 31Ny finoana no tsy nahafatesan-dRahaba vehivavy janga niaraka tamin'ny fahavalo, satria nandray ny tily tamim-pihavanana izy.
32Ary inona koa no holazaiko? Tsy ho ampy ny andro hilazako ny amin'i Jedeona, Baràka, Samsona, Jefte, Davida, Samoela, mbamin'ny mpaminany: 33fa noho ny finoana koa izy ireo dia nandresy fanjakana maro, niasa ara-drariny, nahazo ny nampanantenaina, nanakombona ny vavan'ny liona, 34namono ny herin'ny afo, afaka tamin'ny lelan'ny sabatra, nositranina tamin'ny aretina, nampiseho herim-po tamin'ny ady, nampandositra ny miaramilan'ny fahavalo; 35nandraisan'ny vehivavy ny zanany maty voatsangana tamin'ny maty. Ny sasany nampijalina ho faty, nefa tsy nety nanao izay hahafahany, mba hahazoany fitsanganana amin'ny maty tsaratsara kokoa; 36ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka ary gadra mbamin'ny tranomaizina; 37notoraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, nirenireny nitafy hoditr'ondry sy hoditr'osy, tsy nanana na inona na inona, nenjehina, nampahorina, 38nefa tsy mendrika ho nitoerany akory izao tontolo izao, nirenireny tany an'efitra izy, sy tany an-tendrombohitra, ary tany an-johy mbamin'ny tany an-davatany. 39Na dia nankalazaina noho ny finoana aza anefa izy rehetra ireo, dia tsy nisy nahazo ny nampanantenaina, 40fa isika no namboaran'Andriamanitra zavatra tsaratsara kokoa, ka tsy tonga amin'ny fahatanterahana ireo raha tsy efa mby eo koa isika. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0107 seconds